Me Olalah : “Voahitsakitsaka ny fitsarana…” | NewsMada
Me Olalah : “Voahitsakitsaka ny fitsarana…”
“Mihevitra fa manao izay tiana hatao, satria hoe mpitondra. Hitsakitsahina avokoa ny vahoaka, ny lalàmpanorenana, ny lalàna, ny fitsarana… Entin’ny tena any ivelany koa izany, ka nasongadin’ny olona any fa tsy mety izany” hoy ny mpisolovava, Me Razafinjatovo Willy na Olala, teny Anosy, omaly, momba ny fisian’ny tomponandraiki-panjakana nilaza fa ara-dalàna ny fanondranana ireo andramena tratra tany Singapour.
Fanta-dry zareo any an-toerana fa efa norarana io zavatra io. Mazava fa fanondranana an-tsokosoko izany, araka ny fanazavany. Mahamenatra. Amin’ny tanin’ny tena no zatra manao an’izay ny tena, mbola entina any amin’ny firenena hafa…
“Lavin’ny firenena ny fomba fanao aty amintsika. Tsy vitan’ny hoe mamahan-dalitra ny vahoaka malagasy ny fanjakana, fa mitondra ny toetra ratsy any ivelany. Mampiseho izany any ivelany: fotaka be… mahamenatra“, hoy izy.
Mahamenatra ny fitsanganan’ny fitondrana malagasy tany Singapour, izay nilaza fa hoe ara-dalàna ny amin’ireo andramena. Nefa nolavin’ny fitsarana any fa tsy marina izany. Tsy mety ny fitsanganan’ireny olona ireny, na mitondra taratasy aza izy.
Tena tsy voahitsakitsaka ny fitsarana, ary tena manao ny fahamarinana ny mpitsara any, mitondra ny tena fahamarinana sy manao ny lalàna ao aminy izy, araka ny fanazavany.